Igantsha lethule umkhankaso wokhetho | News24
Igantsha lethule umkhankaso wokhetho
isithombe: sithunyelweNgamalunga eGantsha leANC eMabhiinki
Inhlangano I African National Congress egatsheni laseMabhinki selethule ngempumelelo umkhankaso we”Thuma Mina” ngempelasonto.
Ekwethulweni kwalomkhankaso kubonakale amavolontiya angaphezu kwa-40 ezibophezela ukungena umuzi nomuzi bekhumbuza abantu ngokhethu lukazwelonke lwangonyaka ozayo.
Usihlalo wegantsha uMnuz Phumlani Mzobe nothe lomkhankaso uhlose ekubeni uvuselele onembeza kumalunga ka ANC ngokukhumbula nokughuba iikhulunyaka selokhu kwazalwa amaqhawe omzabalazo okungu Nelson Mandela kanye no Albertina Sisulu abebezoba neminyaka eli-100 nonyaka.
“ Amalungu ethu azobe engenelele umkhankaso wokuxhumana nabantu, belalele izimvo zabo kanye nokuza nezisombululo ezinkingeni ezibakhungethe,”kubeka uMzobe.
Uphinde wathi uqhekeko elubonakala emphakathini kungenhla yokwehluleka kwezinhlaka zeANC zokubona izinkinga zisekude nokudalwa ukungaxhumani nabalandeli beqembu.“Igatsha lizoba nemidlalo ngenyanga kaNhlangulana (June), izinhlelo ezihambisana nosuku lukaMandela ngoNtulikazi ( July), ukwethulwa kwezinhleo zabesimame abasebancane ngo Ncwaba ( August), ukukhunjulwa kwamaqhawe ngoMandulo (September) kanye nemikhuleko yokuphela konyaka ngoZibandlela (December),” kuqhuba uMzobe.